साझको फ्लाइटमा अमेरिका जान तयार भएकी अनिता बुबालाई फोन गरेको केहि समयमै आ’ त्म’ह’ त्या ! – Online Khabar 24
साझको फ्लाइटमा अमेरिका जान तयार भएकी अनिता बुबालाई फोन गरेको केहि समयमै आ’ त्म’ह’ त्या !
October 9, 2021 by admin admin
दिउँसो घर आएर नै कुरा गर्छु है बुबा’ गत बुधबार (असाेज २०) बिहान करिब साढे ७ बजेतिर बाबु रामचन्द्रसँगको केही समय भेट्दा अनिता रेग्मीले भनेकी थिइन्।
केही दिनअघि माइतीघरमा आएकी छोरीले दराजको साँचो छोडेपछि बिहान नै साँचो पुर्याउन रामचन्द्र छोरीको घर नजिकै पुगेका थिए।२० मिनेटजति मोटरसाइकलकाे यात्रा गरेर बाबुले बुटवल उपमहानगरपालिका-१३ स्थित ढावहलवामा छोरी अनिताको घर नजिकै पुगेर साँचो दिए।
तर, उनी छोरीको घरमा भने गएनन्। छोरीसँग दिउँसो भेट्ने आशामा उनी त्यहीबाटै फर्किए। दिउँसो छोरीसँग भेटघाट हुनेमा विश्वस्त थिए, उनी। शुक्रबार (आज) बिहान साढे ८ बजे काठमाडौंबाट २६ वर्षीय अनिता रेग्मीको अमेरिका यात्रा हुँदै थियो।
धेरैको सपनाको शहर मानिने अमेरिका जान अनिता पनि उ’त्सुक नै थिइन्। त्यसैले उनी बिहीबार (हिजाे) नै बुटवल छोड्दै थिइन्। कति वर्षपछि आमा-बुबासँग भेट्ने हो, टुङ्गो थिएन। त्यसैले अन्तिम पटक आमा-बुबा, दाइ-भाउजूलाई भेटेर बिदा माग्न माइतीघर आउने योजना सुनाएकी थिइन्, अनिताले।
समय बित्दै भयाे। माइती परिवार छोरीको प्रतिक्षामा बसिरहेकाे थियाे। तर सोचेकोजस्तो भएन। छोरी भन्दा पहिले उनको घरबाट भाउजूको नम्बरमा १ बजेर ४७ मिनेटमा एउटा कल आयो। जुन खबरले माइती परिवारको एकाएक खु’शी लु’ट्यो। अघिसम्म फोनमा खुशी भएर बोलिरहेकी छोरी म’रे’को खबर आयो।
‘तपाइको छोरी’ले झु’ न्डि’ए’र आ’ त्म’ह’त्या गरिन् भनेर फोन आएको थियो। एकछिन पत्याउन नै गाह्राे। होस’हवा’स नै गुम्यो,’ बाबु रामचन्द्रले भने।तीन वर्षअघि अनिताको घर निजकै मागी बिवाह भएको थियो। डीभी परेर अमेरिका गएकाे केटासँग छुट्टीमा आएका बेला अनितासँग विवाह भएको थियो।
शनिबार अनिता पनि त्यही डीभी प्रकृियामार्फत् नै अमेरिका जान लागेकी थिइन्। तर छोरी’को मृ’त्यु’को खबरले रेग्मी परिवार अचानक शोकाकुल बन्न पुग्याे। हतारिदै माइती परिवार छाेरी अनिताकै घरमा पुगे। घर पुग्दा फोनमा भनेझैं छोरी को’ठा’भित्र पंखा’मा सलको पासो बनाएर झु’न्डि’ए’को अ’बस्थामा भेटिइन्।
दिउँसाे घरमै सासु, देवर र अर्काे एक जना सदस्य हुँदा नै अनिताले ढोका खुल्लै पारे’र झू’न्डि’ए’की थिइन्। शनिवार अमेरिका उड्न लागेकी छोरी यस’री झु’न्डि’नु’को कार’ण माइती परिवारले अझै भेटाउन सकेका छैनन्। केही समयसघि सम्म हाँसेर बोलेकी दिदि यसरी झु’न्डिँ’दा दाई महेश पनि अ’नुत्त’रित बनिरहेका छन्।
‘किन यसरी झु’न्डिनु’प’र्यो, यो कुनै ह’ त्या वा आ’म’त्म’ ह’ त्या गर्न प्रेरि’त गरेको जस्तो लाग्छ,’ दाइ महेशले भने। घट’ना हुँदा अनिताका घरमा श्रीमान्, ससुरा र एक जना देवर भने थिएनन्। प्रहरीले श’व’को पोष्टमार्टको लागि लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल लगेको छ।
परिवारले घटनामा निष्पक्ष छानविन नभएसम्म श’व न’बुझ्ने अ’डान लिएका छन्। प्रहरीमा निष्प’क्ष छा’न’विन’को लागि उजु’री’समेत दिएका छन्। ‘हामी अ’नुस’न्धान ग’रिरहेका छौं। अहिले नै यही हो भन्ने अबस्था देखिएको छैन,’ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मदनबहादुर कुँवरले भने। पछिल्लो केही महिनामा चितवन र रुपन्देहीमा यस्ता घ’ट’नाहरु बढ्दै गएकाे देखिएको छ।
पछिल्लो समय प्र’हरीसमक्ष आ’ त्म’ह’ त्या दु’रु’त्सा’हनका उजुरी आउनेक्रम बढिरहेकाे छ। वर्षभरी ६ सय मानिस’को ह’ त्या हुन्छ। त्यस्तै, दु’रु’त्सा’हबाट ह’ त्या भए’को भन्दै उजुरी पर्नेको सङ्ख्या १ सय ५० रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय ५० भन्दा बढी दु’रुत्सा’हका उजु’री आएकाे प्रह’रीले जनाएकाे छ। यो खबर खबर नेपालीबाट साभार गरियको हो ।
Prevलकडाउनमा सँगै बस्न दिक्क लागेपछि महिलाले पतिलाई विक्रीमा राखिन !
nextपतिले छोडेपछि सडकमा झाडू लगाउँथिन् आशा, सरकारी अधिकृतमा नाम निस्किएपछि सबै छक्क !